မမသီရိ: August 2010
သူ့ရဲ့ ရှင်သန်ရှင်များ အတွက်တော့
ကိုယ်က သူ့ ကို အမြဲတောက်ပစေချင်သူ)
သူ့မြေမှာ အဖြူအ၀ါတွေ တင့်နေတာ
မြင်နေရ . ကြည့်ရင်းနဲ့ကျေနပ်
အသာ ဖော့ ဖော့ တွေး
သူ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ အတွက်ပဲ
ကိုယ်က လိုက် လေးပင်နေ..
ကျမ.. ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကာလ အတော် ကြာခဲ့ပြီ..ကွဲ့
ကျမရဲ့ နံနက်ခင်း ဆုတောင်းများကတော့ မင်းအတွက်ပဲ သာ..
အို.. တန်ခိုးရှင်.. သူ့အား အစဉ်သဖြင့် ရှင်သန်ခွင့်သာ ပေးပါလေ..။
သူ၏နံနက်ခင်းများအား ကြည်နူးမှုများဖြင့် ထွေးပွေ့ပါလေ..။
သူ၏နေ့လည်ခင်းများအား.. တက်ကြွခြင်းများဖြင့် ပြည့်စုံပါစေ..။
သူ၏ ညနေခင်းများအား တမ်းမက်ခြင်းကင်းသော အဖြစ်သို့ရောက်ရပါစေ..။
သူ၏ ည များအားလရောင်များဖြင့်သာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ...။
ငါ ၏ ချစ်ခြင်းတရားများ ...သူ့အား ထာဝရ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါလေ...။
Posted by မမသီရိ at 8/28/2010 04:29:00 PM
ပြီးခဲ့မေလ တုန်းက ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ တလကျော်လုံးလုံး ဟိုနား ဒီနား တချိန်လုံးလိုလို ကြားခဲ့ရပြီး နားစွဲနေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး .. သင်တန်းထဲမှာ တောင် အသက်ကြီးကြီး တွေရော အသက်ငယ်ငယ်တွေရော တိုးတိုးလေး ငြီးကြ.. စိတ်ရှုပ်တဲ့ခါတွေမှာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ကြ..နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်တိုင်လဲ နှစ်သက်တာမို့ ကိုယ့်ဘလော့လေးထဲမှာ အမှတ်တရ သိမ်းထားမလို့ပါ..။
Posted by မမသီရိ at 8/25/2010 05:46:00 PM
ရှုံးမယ် မြတ်မယ်လို့ မသေချာ..
ရှုံး ဟယ် မြတ်ဟယ်လို့ လဲ မမျှော်ကိုး..
မေတ္တာကိုသာ တနင့်တပိုး ရင်းနှီးခဲ့ခြင်းမျိုးပါ့..
နေ့ပြန်တိုး ညပြန်တိုး.. ညပြန်တိုး နေ့ပြန်တိုး...
ဆထက်ထမ်းပိုး.. တိုးပြီးရင်းနဲ့ တိုးနေခဲ့..
ပြန်တောင်းလို့သာ ရ . ရ စတမ်းဆို..
ကျမရဲ့ ချစ်သူလေး ... မောင်...
ဒီသံသရာ ကိုလှည့်ပြန်ပြီး ပြေးလို့ဆုံးအောင် ဆပ် ပါ လဲ
အရင်းသော်မှ.. ကျေဖွယ်မမြင် ..
ကဲ... ပြောခဲ့ကြစမ်းပါအုံး ရှင်တို့ရယ်...
အချစ်မြီရှင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျမ
သူ့ဆီက အကြွေးတွေ ပြန်တောင်းရမလား ရယ်လို့...။
Posted by မမသီရိ at 8/23/2010 06:31:00 PM
မျက်ဝန်းမှာ သံယောဇဉ် အရိပ်အယာင်တွေ ရှိတယ်
မပြုံးတတ် ပုံဖမ်း မုန်းချင်ယောင်ဆောင်တယ်
(((( အော် ))))
မောင် .. မောင်.. မောင်.. ရဲ့...
လူသားပေါင်း သန်း ခြောက်ထောင်အလယ်..
လွယ်လွယ်နဲ့ ဆုံ ခဲ့ကြတာ မဟုတ်..
လွယ်လွယ် နဲ့ တွေ့ခဲ့ ကြတာ မဟုတ်...
လွယ်လွယ် နဲ့ ချစ်ခဲ့ရတာ မဟုတ်...
ရေစက်ရယ် ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်...
ဆူးတွေ ငုတ်တွေ ရှိတယ်
လျှိုတွေ မြောင်တွေ ရှိတယ်...
နံရံတွေ တောင်တွေ မြင့်တယ်..
နွေမုန်းတိုင်း.. သဲနေတဲ့ ရက်တွေ မှာပဲ..
ကံ့ကော် ၀တ်ဆံတွေ တုတူ မွှေး..
အိုအေစစ် ရေကြည်အေးကို အတူတူဖော်..
လောကဓံ ဆိုတာတွေ ခါး ဆည်း ခံ...
ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ နာကျင်နေပါလျှက်
ငို ခါငို.. ပြုံးခါပြုံး..ကုန်းရုန်း ဖြတ်သန်း လာခဲ့ကြရတာ..
ဇာတ်လမ်း အလယ် ရောက်ပြီးနေခါမှ...
ကျမ ရဲ့ သောင်မတင်ရေမကျကလေး ရေ..
ကျမက ရိုးရိုးလေး ပဲ ပြောချင်တယ်..
ချစ်မှာလား ရှင်..ရဲရဲ ချစ်ပေါ့..
ထားမှာလား ရှင်.. ထားခဲံ့လိုက်တော့..
ထာခဲ့ မှာလား.. တကယ် ပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ ရှင်....။
Posted by မမသီရိ at 8/19/2010 12:04:00 PM
ပင်လယ်ကမ်းစပ်က လေနုအေး ရယ်
ဘာများ ကွာခြားလို့လဲ ကွယ်..
ကြည်လင်ခြင်းကတော့ အတူတူ ပါပဲ
ဆာဟာရက နှင်းဆီ ပွင့်ရယ်..
ဥရောပ က နှင်းဆီ ပွင့်ရယ်..
မွှေးပျံ့ ရနံ့ က အတူတူ ပါပဲ...
အချစ်ပုခုံး ပေါ်က လရောင်ရိပ်ရယ်..
ဘာများ ကွာခြားလို့လဲ ကွယ်...
ကြည့်နူးမှု ကတော့ တူခဲ့တာပဲ
အာကာအစွန်အဖျားနားက တိမ်နုနုလေး တဆုပ်ရယ်
မှန်ပြတင်းတံခါး တခုနောက် ချစ်သူ့ အရိပ်ကလေးရယ်
ထိတွေ့ ထွေးပွေ့ လို့မှ မရနိုင်တာပဲ..
မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးပေါ်က အိပ်မက်ကလေးရယ်
ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ အတိတ်ဘ၀ ဆိုတာရယ်
ဖမ်းယူ ဆုပ်ကိုင်လို့မှ မရနိုင်တာပဲ..
နာကျင် လွမ်းဆွတ်မှုတွေ နဲ့ ကြေကွဲနေပါတယ် အချစ်ရယ်.....။
Posted by မမသီရိ at 8/13/2010 07:30:00 PM
နှင်းဆီ အိပ်မက် ဆူးတွေယှက်ရံ
အသံတိတ်ဆိတ် .. အိပ်နေတဲ့ ည
လောက အလှ မြင်မရမီ
မွှေးတဲ့ ရနံ့.. သင်းပျံ့ ချိုအီ..
ထုံကြည် ရီအေး... ပန်းကလေး ကို..
ရင်ဝယ် ထွေးပိုက်.. ခူးပစ်လိုက်ချင်
ရည်ရွယ် စိတ်ကူး အရူး အတွေး
ရှမိ တော့ မဲ့..
အိုး..... သူ့ဘေးမှာ ဆူး ကလေးတွေ...
ရင်ဝယ် ရှိုက်မက် တသက်သက် နဲ့
နှင်းဆီ ရနံ့ သင်းပျံ့ပျံ့ ကို
ပန်းသာ ဘုံနန်း လျှောက်တက်လှမ်း လို့..
သက်တန့် တံတား ဖြတ်သွား တဲ့ခါ..
ကြယ်တွေ နှုတ်ဆက် ဝှေ့ရမ်းလက်ပြ
သာယာတဲ့တေး.. ဖြည်းလေးစွာ ဆို..
အို... ဒီလောက ပျော်စရာအလှနဲ့
ဝေဒနာတွေ.. ဘေးကို ဖယ်ထွက်
ရင်ထက် အပျော် သိပ်ပျော်ပေမဲ့..
ဆူးတွေ နဲ့ ပန်း
လက်လှမ်းမရ.. နမ်းမ၀ တာ
ပျော်ခွင့်တွေ ကြုံ ကမ္ဘာဘုံမှ
တို့ဘေးမှာ ဆူး.. စူးနစ်ဥိးမယ်
ရယူလိုဇော စိတ်မနော နဲ့
လှမ်းမိတဲ့ လက်.. လမ်းထက် ရပ်တန့်
မွန်းကျပ်ခံစား ပန်းစကား က
မျှားကလေးသဖွယ် .. အသဲ ၀ယ်လာမှန်..
ငှက်ကလေး ငို.. နေလဲ ညိုပြီ
အလွမ်းတာရာ ဝေဒနာ နဲ့
အိပ်မက် အပြင် လှမ်းထွက်ချင်တယ်
ရင်မှာ တိတ်ဆိတ်.. နိုးတ၀က်စိတ်နဲ့
မှတ်ချက်။ ။ Draft နေ့စွဲပြန်ကြည့်မိတော့ ဒီကဗျာ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားခဲ့တာ တနှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ.. ကဗျာစာကြောင်း တစ်ကြောင်းနဲ့ စထားတုန်း ရွာသားလေး(YTU) ဆီမှာ နှင်းဆီပန်းပုံတွေ တွေ့လို့ ဆူးပါတဲ့ နှင်းဆီ ပန်း ပုံ တွေလှမ်းတောင်းခဲ့တော့. သူကလဲ မတွန့်မတို ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်.. ဒီ ဓါတ်ပုံ ရထားခဲ့တာလဲ တနှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ.. စတုန်းက ရေးဖို့စိတ်ကူးထားတွေပဲ ရေးဖြစ်သလားဆိုတာ မသေချာပေမဲ့ နောက်ဆုံး တော့ ခေတ်ဟောင်းပုံစံ ကဗျာလေး တပုဒ် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ.. အမှန်တော့ ဒီကဗျာ ခေါင်းစဉ်ကလဲ ကျမ စိတ်ထဲ ကလေးဘ၀ ထဲ စွဲလမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေရဲ့ အကယ်ဒမီလက်ရာ နှင်းဆီနီ အိပ်မက်.. ကို နှစ်သက်လွန်းလို့ ပေးမိတဲ့ အမည်လေးပါ..
ဓါတ်ပုံ အတွက် ရွာသားလေး ကို ကျေးဇူးမှတ်တမ်း တင်ပါတယ်။
Posted by မမသီရိ at 8/03/2010 07:47:00 PM